पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अघिपछि सधै‌ँ किन भेटिन्छिन् बुहारी ? - Nalapani
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अघिपछि सधै‌ँ किन भेटिन्छिन् बुहारी ?
काठमाडौं । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह मंगलबार साँझ पोखरा पुगेकी छन् । अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउनका लागि छोराछोरी लिएर हिमानी पोखरा पुगेकी हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बुहारी र नातीनातिना लिनका लागि पोखरा विमानस्थलमा आफैं पुगेका थिए । दुई साता लामो भ्रमणका लागि ज्ञानेन्द्र पत्नी पूर्वरानी कोमलसहित अघिल्लो साता पोखरा पुगेका थिए । परिवारका अन्य सदस्य भने निर्मल निवासमा नै थिए ।
ज्ञानेन्द्रका हरेक भ्रमणमा ढिलो या चाँडो बुहारी हिमानीको सहभागीता हुने गरेको छ । केही महिना अघि ससुरा–बुहारीले थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतको भ्रमण गरेका थिए । ति भ्रमणमा केही राजनीतिक र नेपालको अवस्था बारे भारतीय अधिकारीसँग कुराकानी र परामर्श भएको बताइएको थियो ।
गत साउनमा जन्मदिन मनाउनका लागि नेपालगञ्जको सोल्टी होटलमा पूर्वराजाको सहभागीता रहेको थियो । जहाँ, हिमानीको पनि अनिवार्य उपस्थिति थियो । त्यसअघि काठमाडौंमा रहेको त्रिसराको डिनरमा पनि परिवारका सबै सदस्यको उपस्थिति थियो । जहाँ, हिमानी अनिवार्य उपस्थित थिइन् ।
अघिल्लो बर्ष झापाको हिमालयन टि गार्डेनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पहिला नै पुगेका थिए । त्यो एक महिनाको बसाईको बीच समयतिर हिमानी झापा पुगेकी थिइन् ।
अघिल्लो बर्षको हिउँद्मा पूर्वराजा छोरा पारसबाहेकका सदस्य लिएर पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्किएका थिए । नेपालगञ्ज हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशको लखनऊसम्म पूर्वराजाको भ्रमण भएको थियो । त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले उनलाई सम्मान गरेका थिए । सो भ्रमणमा पनि हिमानी साथै रहेकी थिइन् ।
निर्मलनिवासको उत्तराधिकारीका रूपमा हिमानीलाई रोजेका कारण आफ्ना अनेक भ्रमणमा पूर्वराजाले बुहारीलाई अनिवार्य उपस्थिति गराउँदै आएको राजावादीहरू बताउँछन् ।
बीचका केही बर्ष छोरा पारस शाहका गतिविधिका कारण ज्ञानेन्द्रले उनलाई चासो देखाएका थिएनन् । पारस लामो समयसम्म थाइल्यान्डमा प्रेमिकासँग बसेका थिए । लागुऔषध प्रयोग गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई छुटाउनका लागि पनि ज्ञानेन्द्रले हिमानीलाई पठाएका थिए ।
राजपरिवारमा उत्तराधिकारीका रूपमा छोराको बलियो उपस्थिति हुने प्रचलन भए पनि पारसको चरित्रका कारण बद्नाम भएपछि उनले बुहारीलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडी सार्दै आएको बताइन्छ । यसैले पनि उनका हरेक योजनामा हिमानीको प्रत्यक्ष सहभागीता हुँदै आएको दरबार निकटहरू बताउँछन् ।
← छोराको उपचारका लागि किड्नी बेचेकी रविनाले छोराको जन्मदिन मनाउँदै गरिन् यस्तो प्रतिज्ञा, संधै रोएको मात्र देखिने रविना भइन् निकै खुसी (भिडियो हेर्नुस्) दुई लाख ५० हजार घुस सहित वडा सदस्य पक्राउ →